Deg deg: Ciidamo ka tirsan kuwa Mareykanka oo lagu dilay dagaalkii ka dhacay Shabeelada Hoose - Hablaha Media Network
Deg deg: Ciidamo ka tirsan kuwa Mareykanka oo lagu dilay dagaalkii ka dhacay Shabeelada Hoose
HMN:- Hal askari oo ka tirsan Ciidamada Mareekanka ayaa la dilay sidoo kalana laba kale ayaa dhawaac kasoo gaaray dagaalkii ka dhacay Gobolka Shabeelada hoose markaas oo ay ciidamada xoogga iyo kuwa ka tirsan Mareekanka weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Warkaan ayaa waxaa qoray CNN oo soo xiganayey saraakiil ka tirsan wasaaradda Gaashaandhigga Mareekanka.
Dagaalkaan ayaa ka dhacay meel 40 Mile Galbeed kaga beegan Muqdisho una dhow Magaalada Barii, waxayna saraakiisha sheegeen in labadii askari ee dhaawac soo gaaray ay heleen daaweyn deg deg ah waxaana la xusay inay ku dhaceyn xabado yar yar.
Ciidamada Mareekanka ee weerarka qaaday ayaa waxay qeyb ka yihiin howgalka Militari oo ay dowladda Mareekanka ku caawineyso Ciidamada Badda Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa dhowaan duqeeyay garoonka diyaaradaha ee Bali doogle oo ay fariisin ciidan ku leeyihiin ciidamo Mareykan ah oo garab siinaya howlgalka AMISOM ee Soomaaliya kuwaas oo u badan tabobarayaal ciidan .
Saraakiisha ciidamada dowlada Somaaliya wali kama aysan hadlin weerarkaan maanta lagu qaaday deegaanka Mubaarak ee Shabeelaha Hoose .